GCINA IMIKHOMBE NGEHUBLOT'S BIG BANG UNICO SORAI - UHLOBO
Gcina imikhombe ngeHublot's Big Bang Unico SORAI
UHublot wenza kancinci kulondolozo kunye nokukhululwa kwe IBig Bang Unico SORAI . Eli xesha lishicilelweyo lilinganiselweyo alijongi nje kuphela elihle, kodwa imali evela kwintengiso yeewotshi iya ngakuyo Khathalela i-Wild , elona khaya likhulu lomkhombe nelona likhulu ehlabathini.
Ukunyamekela i-Wild ayenzi izinto zodwa, kunye nesinye isiseko, Gcina iRhino Afrika yethu eIndiya (SORAI), ikwabandakanyekile. Unxibelelwano apha ngumsunguli we-SORAI kunye nowayesakuba ngumdlali weqakamba waseNgilani uKevin Pietersen, okwenzeka ukuba abe ngunozakuzaku weHublot.
Yonke imihla lidabi, ugqatso oluchasene nexesha ngamaqela eengcali ezizinikeleyo ezihlangula, zihlaziye, kwaye zikhulule le mikhombe ibuyele endle, ePietersen uyacacisa . Asifuni kuphulukana nenye yeBig Five, hayi eyethu kodwa eyabantwana babantwana bethu. Kufuneka ke ngoko sibeke imizamo yethu efanayo ukukhusela olu hlobo! Ndonwabile kakhulu ukuba uHublot waphinda wakwazi ukubonelela ngenkxaso yakhe kwi-SORAI, ukunceda ekuphakamiseni ulwazi oluphezulu malunga nongxamiseko lwehlabathi.
Ngaphandle kwemikhombe emnyama engaphantsi kwama-500 emhlabeni, yomibini le mibutho yenza konke okusemandleni ayo ukuphinda izalise ezi ntlobo zisengozini. Ngoku unganceda ngokutshiza kwi-100 kuphela yeHublot Big Bang Unico SORAI chronographs.
Ukulandela ushicilelo lwe-beige 2019, oku kukhutshwa mvanje kuza ngee-shades ezimbini eziluhlaza kwaye kunazo zombini irabha kunye nelaphu lokufihla imitya. Ityala le-45 mm matte ceramic lakha izindlu zeHublot's MHUB1242 Unico intshukumo ye-4Hz kwaye inevili lekholamu kunye nokugcinwa kwamandla kweeyure ezingama-72. Udibaniso olucocekileyo ngumkhombe omnyama osebenza ngentsimbi ye-9, ngelixa isafire ikristale ebuyisela umva ezemidlalo ilogo ye-SORAI.
IHublot Big Bang Unico SORAI ifumaneka kuphela kwi-Intanethi nge- $ 24,100 USD.
Bona ngakumbi malunga - Amaqela kaSteve Aoki aneBvlgari yokuKhanya kuBumnyama obuMnyama
Umdibaniso wethayile kunye nemifanekiso yomgangatho womthi
tattoo kwimemori katata
Njengasentla ngentla kwesandla
ilifa lokulwa umvambo ngamaphiko
ukakayi kwaye yavela imibono ye tattoo